Acrylic Mirror Sheets |
Acrylic Lens ၏အင်္ဂါရပ်များ
05-04-01 တွင် admin မှ
A. နည်းပါးသောသိပ်သည်းဆ- မော်လီကျူးကွင်းဆက်များကြား ကွာဟမှုကြောင့်၊ တစ်ယူနစ် ထုထည်တစ်ခုလျှင် မော်လီကျူးအရေအတွက်သည် သေးငယ်ပြီး အစေးမှန်ဘီလူး၏ အားသာချက်များကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်- 1/3-1/2 ရှိသော တိကျသောဆွဲငင်အားနှင့် ပေါ့ပါးသော texture၊ မှန်ဘီလူး;B. အလယ်အလတ်အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း- သာမန် CR-39 propylene အစားအသောက်...
Acrylic Lens မိတ်ဆက်
05-01-01 တွင် admin မှ
အစေးမှန်ဘီလူးသည် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။အတွင်းပိုင်းသည် သုံးဖက်မြင် ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပိုလီမာကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံသည် အတော်အတန် ဖြေလျှော့ထားပြီး မော်လီကျူးကွင်းဆက်များကြားတွင် နှိုင်းယှဥ်ပြောင်းခြင်းကို ထုတ်ပေးနိုင်သည့် နေရာတစ်ခုရှိသည်။မီးခိုး...